N'ikpeazụ Koush malitekwara Vysor na Storelọ Ahịa Play | Gam akporosis
Koush bụ otu n'ime ngwa mmepe kachasị mma anyị nwere na gam akporo na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ gara aga ọ malitere Vysor inwe ike yiri enyo na ihuenyo site na mkpanaka anyị na komputa anyị iji jikwaa ekwentị na igwe ojii na ekwentị. Ngwa nke biara jiri onodu doro anya nke inyere ndi mmepe aka, ndi mmebe ma obu onye oru ahu choro ima otu esi ejikwa ekwenti ha na komputa ha.
Ngwa dị n'aka ime nyocha ihuenyo nyocha na PC site na iji ngwa Chrome na ADB iji nye interface n'etiti ekwentị ma ọ bụ mbadamba na kọmputa. Site na ịnweta ngwa dị na Playlọ Ahịa Google ugbu a, ọ kwesịrị ime ka ihe dị mfe maka mgbasa ya, ebe ọ bụ na anyị na-eche otu ọrụ kachasị mfe iji kọmputa iji chịkwaa ihe na-eme na ekwentị mkpanaaka.
Vysor bụ ngwa nwekwara ike ịdị arụnyere na ADB mgbe ị na-eji ngwa Chrome. Ihe ngwa gam akporo n’ezie na-enyere aka na ntinye ihe omume na kọmputa ka anyị ghara ichefu usoro ọ bụla.
Iji Vysor eme ihe dị mfe, ebe ị ga - eme ya jikọọ mbadamba nkume ma ọ bụ ekwentị na kọmputa, mee ka USB debugging na Onye Mmepụta Nhọrọ wee họrọ "Chọọ Ngwaọrụ" na ngwa Vysor Chrome. Ọ bụrụ na amara ọrụ ahụ n'ikpeazụ, a ga-egosi windo mmapụta na-arịọ anyị ka anyị rụọ ọrụ nbipu USB. Anyị pịa "Ok" na anyị ga-adị njikere nwere windo na kọmputa ga-egosi na ekwentị onwe ihuenyo.
The ngwa nwere a adịchaghị version na activates elu-edu mirroring, ọnọdụ ikuku na ihuenyo zuru oke na nhọrọ iji nyefee faịlụ. Nwere ngwa ahụ dị na Storelọ Ahịa Play.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Koush na-ebupụta Vysor na Storelọ Ahịa Play
Anyị na-akpọtụ ụfọdụ RHA T20, ekweisi ntị kacha mma na ahịa